ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်မှာအဘယ်နည်း။ - လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသခြင်း
Created On ဖေဖော်ဝါရီလ 26, 2020
Software ကို Maintenance သဘောတူညီချက်ကဘာလဲ?
ဆော့ (ဖ်) ဝဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ဆိုသည်မှာဆော့ဖ်ဝဲလ်ကဏ္inတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသောသဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သုံးစွဲသူနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးတွင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဆက်လက်အသုံးပြုရန်သေချာသည့်သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ software ပံ့ပိုးသူသည် software ကိုထိရောက်စွာဆက်လက်လည်ပတ်စေရန်နှင့်၎င်းသည်နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများနှင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများနှင့်ကိုက်ညီစေရန် software ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် update လုပ်ရန်သဘောတူသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သင် update များလွှတ်ပေးပြီးသည်နှင့်ထို update များကိုသင်ရရှိရန်သေချာစေရန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုသင်လက်မှတ်ထိုးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်၏ကားသည်နှစ်စဉ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလိုနေသကဲ့သို့ရေနံလဲခြင်းသို့မဟုတ်တာယာညှိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်ဆော့ဖ်ဝဲလ်သည်လည်းအလားတူပြင်ဆင်မှုများလိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နည်းပညာလောကသည်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
EMD ၏ Maintenance Agreement ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း
သုံးစွဲသူတိုင်းကို Easy Multi Display အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခွင့်အရေးပေးသည်။ အကယ်၍ သင်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်ပါကနှစ်စဉ်အခြေခံအနေဖြင့်ဆော့ဖ်ဝဲကုန်ကျစရိတ်၏ ၂၀% နှုန်းထားဖြင့်ပုံမှန်နှုန်းထားကိုသင့်အားကောက်ခံလိမ့်မည်။
အခြားဖောက်သည်များက EMD ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်တောင်းဆိုသောအခါ၊ သင်လည်း data type connector အသစ်များကဲ့သို့သောဤထပ်ဖြည့်သောအရာများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ငါ Maintenance သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးမထားဘူးဆိုရင်?
ပြဿနာမရှိပါဘူး! သင် Easy Multi Display ကို ဆက်၍ သုံးနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏လက်ရှိဗားရှင်းသည်ဆက်လက်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၊ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဆော့ဖ်ဝဲတွင်ထည့်သွင်းရန်သို့မဟုတ်ထပ်မံဖြည့်စွက်နိုင်သည့်အပိုအင်္ဂါရပ်များကိုသင်မရရှိနိုင်ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များသည်သင်၏ပြသမှုများအတွက်သတင်းရင်းမြစ်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤအင်္ဂါရပ်များကိုအသုံးပြုရန်သင်တစ်နှစ်တာသင်ပေးဆောင်ရမည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ ၂၀% ထက်ပိုသောဆော့ဗ်ဝဲအဆင့်မြှင့်တင်ခကိုသင်ပေးရမည်။
သင်ကျွန်ုပ်တို့၏ Easy Multi Display software ကိုသင်စိတ်ဝင်စားလျှင်နှိပ်ပါ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ဗားရှင်းကို download လုပ်ပါ။ (အသေးစားမှအကြီးကြီးအထိ) ကုမ္ပဏီတိုင်းကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲစေရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Multi Multi Display ဗားရှင်းသုံးမျိုးကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဝဲ၏ပထမဆုံးဗားရှင်း (One Screen) သည် ၁၄၉ ဒေါ်လာ၊ ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံး option တစ်ခုဖြစ်သောဒုတိယ (Standard) သည် ၄၉၉ ဒေါ်လာ၊ နောက်ဆုံးတွင်“ Enterprise” ဗားရှင်းသည် ၈၉၉ ဒေါ်လာကျသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်သို့မဟုတ်ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါရန်တွန့်ဆုတ်မနေပါနှင့်!
Lord Ram ၏အကြီးဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ် display သည် New York Times Square တွင်ထွန်းလင်းသည်
အဘယ်ကြောင့် LED နည်းပညာမိုးလုံလေလုံဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်၏အနာဂတ်ဖြစ်သနည်း